अमेरिकी कम्पनीद्वारा किन लुकाइयो अल्जाइमरको नयाँ औषधि ? – Health Post Nepal
२०७६ असार ४ गते १४:२९
आजकल अल्जाइमरको समस्या आम बन्दै गएको छ । विशेषगरी, ६५ वर्ष उमेर पार गरेका मानिसमा अल्जाइमर मुख्य समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ ।
चिकित्सकका अनुसार अल्जाइमर एक प्रगतिशील रोग हो । यो रोग लागेमा मानिसको स्मरणशक्ति बिस्तारै कम हुन थाल्छ । अल्जाइमररोगको अहिलेसम्म कुनै निश्चित उपचार फेलापरेको छैन । त्यसैले, अल्जाइमरको सही उपचारका लागि अहिले विश्वमा विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेका छन् ।
फाइजर नामक अमेरिकाको चर्चित औषधि कम्पनीले पनि अल्जाइमर तथा पार्किन्सन्सरोगको प्रभावकारी उपचारकै लागि केही वर्षदेखि एउटा बृहत् अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, समस्या तब आयो, जब फाइजरले गत जनवरीमा अल्जाइमर तथा पार्किन्सन्सजस्ता रोगको उपचारमा प्रयोग गरिने नयाँ औषधि नबनाउने घोषणा ग¥यो ।
फाइजरको यो घोषणाले बिरामी तथा शोधकर्ताबीच व्यापक निराशा छायो । त्यसअघि सो कम्पनीले अल्जाइमररोगमा प्रयोग गरिने औषधिको खोजीका लागि लाखौँ डलर खर्चिएको थियो । तर, एकाएक उक्त कम्पनीले सो रकम अन्य काममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गर्यो ।
यस विषयमा फाइजरले भनेको थियो, ‘हामीलाई यो रकम त्यहाँ खर्च गर्न जरुरी छ, जहाँ वैज्ञानिकको पकड मजबुत छ ।’
अमेरिकी पत्रिका वासिंग्टन पोस्टले जनाएअनुसार यो खोजबाट आएको नतिजा अल्जाइमरविरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण हुनुका बाबजुद पनि उक्त कम्पनीले शोधको नतिजा गोप्य राख्यो । आखिर, यो नतिजा उनीहरूले किन गोप्य राखे ? मानसिक स्वास्थ्यलाई अहिले चिकित्सा जगत्मा चुनौतीका रूपमा हेर्न थालिएकाले पनि यो बुझ्न गाह्रो छ ।
यद्यपि, यो अध्ययन सयौँ दाबीका आधारमा गरिएको थियो, जहाँ के पत्ता लागेको थियो भने र्यूमेटिक आर्थराइटिसमा इन्फ्लेमेसन कम गर्न प्रयोग गरिने फाइजर कम्पनीको औषधि ‘एन्ब्रेल’ले अल्जाइमरको खतरालाई ६४ प्रतिशतसम्मले कम गर्न सक्छ । सन् २०१८ मा फाइजर कम्पनीले एउटा समिति गठन गरी दिएको प्रस्तुतिमा भनिएको थियो, ‘एम्ब्रेलले अल्जाइमरलाई रोक्न सक्थ्यो, अल्जाइमरको उपचार र अल्जाइमरको गतिलाई बढ्नबाट कम गर्न सक्थ्यो ।’ कम्पनीले भने वासिंग्टन पोस्टसितको कुराकानीमा यो नतिजा सार्वजनिक नभएको पुष्टि गरेको छ ।
अखबारका अनुसार ३ वर्षसम्म भएको आन्तरिक समीक्षाका क्रममा एम्बे्रल नामक औषधि सीधै मस्तिष्कमा पुग्न नसक्ने भएकाले यो औषधि अल्जाइमरका लागि प्रभावकारी नभएको कम्पनीले बताएको थियो । फाइजरका अनुसार अल्जाइमरविरुद्ध प्रयोग गरिने यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायलको सम्भावना पनि कम थियो ।
वासिंग्टन पोस्टका अनुसार फाइजरले यो नतिजा सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि अल्जाइमरको प्रभावकारी उपचारको खोजमा लागेका वैज्ञानिकलाई योे नतिजाले भट्काउन सक्ने कारण मुख्य थियो । जब कि, अल्जाइमरबारे शोध गरिरहेका शोधकर्ता हार्डबर्ड मेडिकल स्कुलका प्रोफेसर रुडोल्फ ई. टेन्जीले यो नतिजा सार्वजनिक गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।
‘वैज्ञानिकका लागि यो जानकारी निकै उपयोगी हुन सक्थ्यो । चाहे उक्त जानकारी सकारात्मक होस् वा नकारात्मक, हामीलाई सही फैसला लिनमा मद्दत गर्थ्यो,’ अल्जाइमररोगबारे अनुसन्धान गरिरहेका अर्का एक शोधकर्ता जन्स हापकिन्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर किनन वाकरले भने ।
यो नतिजा सार्वजनिक नगर्नुका पछाडि फाइजरको जे–जस्तो कारण भए पनि फाइजरलाई के कुरा थाहा छ भने कैयौँपटक एउटा रोगको उपचारका लागि भनेर तयार पारिएको औषधि अन्य रोगको उपचारमा बढी प्रभावकारी साबित हुन्छन् । भायग्राको हकमा पनि त्यस्तै भएको थियो ।